मिथक - समय समयमा पूर्व-साक्षर समाज देखा एक परम्परा। तिनीहरूले देवताहरूको र आत्माहरू जीवनको progenitors, नायक को कामहरू, कामहरू बारे हामीलाई भन्नुहोस्। मिथक को धेरै धारणा ग्रीक बाट लिइएको हो र जसको अर्थ शब्द "Mytos", देखि व्युत्पन्न "लिजेन्ड।"
मिथकों को पहिलो उल्लेख
verbally प्राप्त औपचारिक संस्कार मा मिथक संग्रह बोल, वरपरका वास्तविकता बारे जानकारी व्यवस्थित गर्न विशेष तरिकामा एक। अर्कोतर्फ, को प्रकृति बारेमा कथा ब्रह्माण्डको को मूल र मानिस यो महत्त्वपूर्ण कार्य को एक नम्बर:, धार्मिक ideological, दार्शनिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक।
मिथकों को विशेष सुविधाहरू कथाहरू को संकलनको, को personification गर्न मनपरी दृष्टिकोण समावेश प्राकृतिक घटना, zoomorphism।
पहिलो चिहानहरू को घटना को समय वरिपरि supersensible आधार बारे विचार को उद्भव। पुरातन चिहानहरू धन्यवाद कला थुप्रै प्राथमिक प्रकारका फेला परेन।
मिथकों को मूल
- छवि - अनुष्ठान गर्ने मिथक: माथिल्लो Paleolithic मा syncretic जटिल को एक स्थिर गठन छ। भर यो संरचना कायम राख्ने मानवता को इतिहास यसको बहुमुखी देखाउँछ। यो धेरै शताब्दीपछि र rationality र अविवेकी सांस्कृतिक कोर झल्काउँछ।
Paleolithic छवि र छन् मिथक, र आफ्नो सिर्जना - संस्कार। "Signified" र आदिम मानिसको मिथक मा "signifier" निरपेक्ष एकता मा अस्तित्व।
मिथक को अवधारणा
त्यहाँ धेरै विज्ञान मा अवधारणा को "मिथक" को विभिन्न व्याख्याहरु छन्। यस मामला मा शब्दहरू अर्थ विस्तृत र विरोधाभासी परिभाषा को एक अधिकता को उपस्थिति मा परिणाम फरक स्थान देखि formulated छ। तिनीहरूमध्ये व्याख्याहरु राष्ट्रिय मूल कथा को शानदार मिथक नामकरण, को encyclopedic शब्दकोश मा दिइएको छ।
साथै, त्यहाँ मिथक बताउँदै आधुनिक संस्करण तैनाथ छन् - यो दुनिया को एक syncretic समझ छ, वास्तविकता संग पहिचान भएका संवेदी विशेष personifications र चेतन जगतले, व्यक्त गरे। यो अवधारणा को व्याख्या मा दार्शनिक दृष्टिकोण व्याख्या र कार्यहरू एक विशिष्ट अनुक्रम निर्धारित, संसारको कल्पनाशील योजना रूपमा मिथक को समझ देखि अगाडि बढ्नुहोस्।
शब्द मिथक के गर्छ? यो प्रश्न अर्थमा-घटक सिन्थेसाइजिङ फरक दृष्टिकोण बाट द्वारा जवाफ गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो अवधारणा को एक पूर्ण र सटीक परिभाषा तैयार गर्न सम्भव छ: मिथक मानव विकास फरक epochs मा वास्तविकता को syncretic प्रतिबिम्ब देखाउन कि पदहरू र तस्बिरहरू मानिन्छ। प्रत्येक संस्कृति एक विशेष कम्पनी को धेरै पक्षहरू जोड दिन्छ जो originality नजिकै,।
मिथकों को typology
को पाठ्यक्रम मिथक सजिलै प्राचीन सकिन्छ कि, बाइबलीय वा अन्य पुराना Tales समावेश छ। तिनीहरूले पुरातन (ज्यादातर ग्रीक र प्रेरित Committing, संसारको सृष्टि संग जोडिएको घटनाहरू बारेमा बताउने रोमन देवताहरूको र नायक)।
अनुसन्धानकर्ताहरूले ऐतिहासिक पौराणिक कथाहरु फरक nationalities को एक महान धेरै काम मा, धेरै आधारभूत विषय र रूपांकनों बारम्बार छन् टिप्पणी। आफ्नो सामग्री निर्धारण गर्छ सबै मिथक को मूल छ। उदाहरणका लागि, सबै भन्दा प्राचीन र आदिम को एक जनावर बारेमा Tales छन्। यी को पुराना, केवल अनुभवहीन Fauna को संकेत वर्णन। र पुरातन अष्ट्रेलियन मिथक मा, उदाहरणका लागि, मान्छे देखि जनावर को मूल को व्यापक सिद्धान्त। तर संसारको अन्य जातिहरूलाई, छैन त स्पष्ट यद्यपि, मानिस एक पटक एक पशु थियो आफ्नो पौराणिक Tales विचार मा फैलियो। यस्तो मिथक उदाहरण: केटी, को परी Daphne, hyacinths, daffodils को र अरूको बारेमा प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथा।
आकाशीय शरीर को मूल पनि अक्सर मिथक मा पवित्र। तथाकथित सौर, lunarnyh र सूक्ष्म Tales सूर्य, चन्द्र र तारा अक्सर एक पटक पृथ्वीमा, र विभिन्न कारणहरूले गर्दा, त्यसपछि आकाशतिर चढेका मानिसहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। यस्तो मिथक - यो ब्रह्माण्ड को गठन गर्न वैकल्पिक मानिसहरूलाई आविष्कार। अर्को साधारण विषय - कुनै पनि अलौकिक हुनुमा सूर्य डिजाइन को प्रक्रिया। यस मामला मा, एक स्वर्गीय शरीर spiritualized छ।
उत्पादन कब्जा धेरै देशहरूको मिथक को totality मा केन्द्रिय स्थान, संसारको सृष्टि र ब्रह्माण्ड र मानिस वर्णन। अन्यथा, तिनीहरूले cosmogony र anthropogonic क्रमशः भनिन्छ। सांस्कृतिक पछाडि मानिसहरूका सानो यी विषयहरू मा narrated। विशेष मा, Aussies मात्र छोटकरीमा पृथ्वीको सतह विभिन्न थियो अघि उल्लेख, तर उनको उपस्थिति बारेमा प्रश्नहरू मंचन कहिल्यै।
पोलिनेसियन, उत्तर अमेरिकी इंडियन्स, पुरातन मानिसहरूका पूर्व र दुई दृष्टिकोण बाट छलफल भू-मध्य cosmogonical प्रक्रियाहरू। तिनीहरूलाई को एक आधारित थियो सिर्जना (creationism) को विचार र अन्य मा - विकास (विकास) को विचार मा। संसारको creationist सिद्धान्त अनुसार उहाँले निर्माता परमेश्वर, जादूगर वा अर्को अलौकिक जा सिर्जना गरियो। विकास को सिद्धान्त मा निर्मित यो मिथक मा, विश्व बिस्तारै एक आदिम अस्तित्व बाहिर विकसित। यो अराजकता, अन्धकार, अन्धकार, आदि हुन सक्छ
को मा cosmogonic मिथक अक्सर intertwine र देवताहरूको र मानिसहरूको मूल को प्रक्रिया को storylines। यसबारे को सबै भन्दा साधारण दृश्य व्यक्ति को चमत्कारी जन्म भएको थियो। मिथक केही शताब्दीपछि पछि afterlife को भाग्य को पहिलो उल्लेख देखियो।
आफ्नो आवाज ढाँचाको मद्दत एउटा मिथक, अज्ञात केही नयाँ कुरा देखाउनुहुन्छ र कहानी को पाठ्यक्रम मा यो नयाँ कसरी देखा देखाउँछ। यो कार्य नायक, पुर्खा, वा परमेश्वरको प्रेरित हुन सक्छ। केहि नयाँ उत्पादनहरु को एक मा भएको थियो र त्यसपछि मात्र निम्न कथाहरू मा उल्लेख गरिएको छ जो घटनाहरू आधार, मा पूरा को षड्यन्त्र विकास मिथक एक श्रृंखला पनि छन्। त्यो छ, तिनीहरूले एक एक प्राथमिकताओं दिइएको रूपमा लिएको हो।
आधुनिक मिथक उदाहरणहरू
को बीसौँ शताब्दीको दोस्रो आधा रूस मा देखा गरेको आधुनिक मिथक, ज्यादातर नै झुकाव छ। केन्द्रीय आंकडा सधैं एक relic जा भएको छ।
र यो दुर्घटना विज्ञान कल्पना लेखकहरूले राखे जस्तै मिथक जग पहिलो ईटा छ। शायद सबैभन्दा हडताली काम एक सिर्जना Artura Konan डोयले ( "खोया दुनिया") र Obrucheva ( "Pluton") गर्न थाले। र storylines एकदम फरक छन्, तर दुवै शानदार काम नै शैलीमा लेखिएका थिए र तिनीहरूले नै विचार आधारित छन् गरौं।
सभ्यता टाढा, संसारको हराएको कुनामा त्यहाँ संयोग द्वारा, सबै आसपास वास्तविकता धरती गरेको टाढा विगतमा जस्तो ठाउँ छ। यो जलवायु, वनस्पति र जीव। यो धारणा पुरातन समयका देखि यसको मूल संसारमा संरक्षित गरिएको छ कि बिरुवाहरु र जनावर बारेमा मिथक को श्रृंखला आधार थियो। मिथक यस प्रकारको एक हडताली उदाहरण - Nessie नाम राक्षस को पौराणिक कथा, एक स्कटिश बसोबास ताल लच नेस।
पनि समुद्र प्राणीहरू (राक्षस), जो नाभिकहरु, hikers र माझिहरु देखे बारेमा धेरै पौराणिक कथाहरू छन्।
आधुनिक मिथक र विज्ञान
समस्या को सार तथ्यलाई मा निहित छ कि वैज्ञानिक तथ्य कठिन रूपमा मिथक को प्रसारण। हामी निर्धक्क भई यो पौराणिक कथाहरु को एक घटक छ भनेर भन्न सकिन्छ। यस मामला मा, यो ideological, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक र प्रक्रियामा जानकारी फैलिएको छ कि चेतना को दोस्रो स्तर बुझाउँछ। यस सन्दर्भमा मा, मिथक - यो बिस्तारै ideological र वैज्ञानिक कारक को प्रभाव अन्तर्गत परिवर्तन अनुमान र दन्त्यकथा, मा आधारित छ जो पौराणिक कथा, मानिस द्वारा artificially बनाएको छ।
पौराणिक कथाहरु को दुई निर्देशनहरू
को उपस्थिति, एक राष्ट्र को गठन र विकास संग सम्बन्धित मिथक को उपस्थिति। त्यो मान्छे कसरी मूल को आफ्नो व्यक्तिगत इतिहास फाराम। पछि mythmaking मानिसहरू आफू द्वारा (कुलीन सिर्जना जो) जनता को लागि अभिप्रेरित गर्दछ र दन्त्यकथा देखिन्छन्। तसर्थ, हामी पौराणिक कथाहरु को दुई बारेमा तरिकामा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ: बन्द र खुला।
निबंध-वर्णन "शीतकालीन परिदृश्य": लेख्न कसरी
शब्द "permeate"। यसको महत्त्व, मूल र प्रयोग को इतिहास
धनी गरिब फरक छन्? (सामाजिक अध्ययन, ग्रेड5जवाफ)
72 Tolyatti स्कूल: छिटो र सजिलै गुणस्तरीय ज्ञान
भारी ग्याँस। यो रेडियोधर्मी र्याडोन ग्याँस: गुणहरू, विशेषताहरु, आधा-जीवन
चाँदीको विवाहको लागि चांदी उपहार: एक यादगार दिनको मूल मूल
"लेम्बोर्गिनी" (साइकिल): विशेषताहरु, स्थान, समीक्षा
निकोले नेक्रासव: रूसी क्लासिकको एक जीवनी जीवनी
गोठालो अनुहारको लागि सही केशिका चाहिन्छ
लामबद्ध जीप: वर्तमान मोडेल
प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि अवलोकन, प्रकार, निर्देशन: दाना "नेस्प्रेस्सो" Analogs
म गर्भवती महिला लागि स्नान गर्न जान सक्नुहुन्छ? एहतियाती उपाय
एक जौहरी आफैलाई कसरी बन्न, कहाँ जाने र के यो लिन्छ एक मास्टर जौहरी बन्न
"बाहिर": अभिनेता र श्रृंखला को सुविधाहरू
एउटा फोल्डर कसरी मेटाउन निश्चित छैन? त्यसपछि तपाईं यो पढ्न आवश्यक!
जो बच्चाहरु पढ्न सिकाउन हुनेछ